पहिलोपटक सेक्स गर्दै हुनुहुन्छ ? जानि राख्नुस् यी कुरा, सेक्सको यो नयाँ तरिका – हाम्रो ईकोनोमी
पहिलोपटक सेक्स गर्दै हुनुहुन्छ ? जानि राख्नुस् यी कुरा, सेक्सको यो नयाँ तरिका
आजभोली सेक्सको बारेमा मानिसहरु खुलेर कुरा गर्न थालेका छन् । तर, पहिलोपटक सेक्स गर्ने बेला केटा होस् या केटी दुबै आत्तिने गर्छन् वा उनीहरुमा एकप्रकारको डर पैदा हुन्छ । पहिलो पटकको यौन सम्पर्कका बारेमा मानिसहरुमा धेरै प्रकारको कौतुहल र जिज्ञासा पनि उत्पन्न हुने गर्दछ ।
जिज्ञासासँगै मानिसहरु यसको बारेमा थाहा पाउन पनि आतुर हुने गर्दछन् । पहिलोपटक सेक्स गर्दा घबराहट पैदा नहोस् भनेर केही खास कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ । खासगरी पुरुषहरुले पहिलोपटक सेक्स गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त ?
आफ्नो पार्टनरले के चाहान्छ, के चाहँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी हुन्छ । नवविवाहित जोडीलाई सबैभन्दा अप्ठेरो पर्ने कुरा नै यही हो । आजभोली विहे अघि नै धेरैजसोको चिनजान र धेरैपटक भेटघाट भैसकेको हुन्छ । यस्तोबेला एकअर्काको भावना साटासाट त हुन्छ । तर बेडरुममा अर्थात् सेक्स गर्ने बेला के मन पर्छ के मन पर्दैन भन्ने कुरा बुझ्नु अत्यत्न जरुरी हुन्छ ।
यसको लागि सेक्स गर्नुअघि आफ्नो पार्टनरसँग सेक्सको बारेमा खुलेर कुराकानी गर्न सकिन्छ । यदि पार्टनरले सेक्सको बारेमा खुलेर कुरा गरेमा निश्चितरुपमा पहिलो पटकको सेक्सको राम्रोसँग मजा लिन सक्छन् ।
कोही पनि बेस्ट हुँदैन
तपाईंले के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भने पहिलोपटकको सेक्समा राम्रो भुमिका निर्वाह गर्न सकिनँ भनेर चिन्ता लिनु पर्दैैन । यसले तपाईंको सेक्स लाइफ बिग्रिदैन । सेक्समा कोही पनि उत्कृष्ट हुदैन । नियमित रुपमा सेक्स गर्दै जाँदा अनुभव हुदै जान्छ र राम्रो सेक्स जीवन बन्छ ।
सेक्स गरिसकेपछि तपाईं आफ्नो पार्टनरसँगै रहनु पर्दछ । कुराकानी गरेर रहन सक्नु हुन्छ । जस्तो की सेक्सको अनुभव कस्तो भयो ? सेक्सको बेला के कमी लाग्यो ? आदि आदि । तपाईं चाहानु हुन्छ भने तपाईंले आफ्नो पार्टनरलाई बडी मसाज गरिदिन पनि सक्नु हुन्छ ।
जानी राख्नुस्, सेक्सको यो नयाँ तरिका
जापानको टोक्योमा ३५ वर्षीय स्कूल प्रशासक अकिहिको कोन्डोले नोभेम्बरमा बिहे गरेका थिए । तर, उनी आमा यो बिहेमा सहभागी थिइनन् । उनकी आमाका लागि यो कुनै उत्सव थिएन । कारण स्पष्ट छ कोन्डाले एक होलोग्रामसँग बिहे गरेका थिए ।
न्यूयोर्क टाइम्सको रिपोर्टअनुसार यस्ता मानिसहरुको संख्या तिब्र रुपमा बढिरहेको छ, जो आफूहरुलाई डिजिसेक्सुअलका रुपमा परिचित गराउन चाहन्छन् । डिजिसेक्सुअल अथवा वास्ताविक मानिसको सट्टा रोबोट र आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सतर्फ आकर्षित हुन्छ । हामी एक यस्तो युगमा बाँचिरहेका छौं, जहाँ रोबोटिक्स र आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्समा तिब्र रुपमा विकास भइरहेको छ ।
केही मासिहरु आफ्नो पहिचान पोलीमरसका रुपमा गराउँछन् भने केही डेमीसेक्सुअलका रुपमा । डेमीसेक्सुअल त्यस्ता मानिसहरुलाई भनिन्छ, जसले केवल भावनात्मक सम्बन्धमा मात्र यौन सम्बन्ध बनाउने चाहाना महशुस गर्छन् ।
केही मासिहरु आफ्नो पहिचान एरोमेटिकका रुपमा गराउँछन् । एरोमेटिक त्यस्ता मानिसहरु हुन्, जो जसमा रोमान्सको इच्छानै हुँदैन । अथवा अब सेक्सुअल पहिचानको दायरा निकै फराकिलो बनिरहेको छ ।
वास्तविक जीवनमा मानव र प्रविधिबीचको रोमान्सलाई पनि अब एक नयाँ नाम दिइएको छ–‘डिजिसेक्सुअल्स ।’
२०१७ मा एक राम्री श्रीमतीको खोजीमा असफल भएपछि चीनका झेंग जिजिया नामका एक इन्जिनियरले आफैले बनाएको एक रोबोटसँग बिहे गरे । यिनग्यिंग नामकी यो रोबोट केही सजिलो शब्द बोल्छ पनि ।
यूनिभर्सिटी अफ मीटोबाका फिलोसफी एसोसिएट प्रोफेसर नील म्याकअर्थर र यूनिभर्सिटी अफ विक्सक्सिन स्टाउटका ह्यूमन डेभलोपमेन्ट एण्ड फ्यामिली स्टडीजका प्रोफेसर माकी ट्विस्टले गएको वर्ष द राइज अफ डिजिसेक्सुअलिटी शीर्षकमा एक पेपर प्रकाशित गरेका थिए । जसमाथि निकै चर्चा भएको थियो ।
डा. ट्विस्टले आफुसँग दोस्रो बर्गका विरामीहरु रहेको बताएका छन् । उनले ती डिजिसेक्सुअल्स विरामीहरुको उमेर २०देखि ३० वर्ष रहेको समेत उनले बताए । उनी भन्छन्, कुनै पनि नयाँ प्रविधि आउँदा त्योसँगै नयाँ चेतना पनि आउने बताउँछन् । पहिला यस्तो प्रोनोग्राफीसँग भयो, त्यसपछि इन्टरनेट डेटिंग र स्न्यापच्याट सेक्सटिंग । एक पछि अर्को प्रविधि आउँदा चिन्ताको लहर पनि बढ्यो । तर, जब मानिसहरुले यी प्रविधिको प्रयोग गरे ती हाम्रो जीवनको एक अंग बन्दै गए ।
क्यालिफोर्नियाको कम्पनी एबिस क्रिएशन यस्तै फीमेल रोबोट बनाइरहेको छ । जसमा अनुहार स्व्याप गर्न सकिन्छ । आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सलेस यी डल्सलाई आँखा मार्न, च्याट गर्न र विस्तारै बोल्न सक्षम बनाउन लागिएको छ ।
जो मान्छेहरुले यी डल्सलाई किन्न सक्दैनन्, उनीहरुका लागि वेश्यालयहरुलाई रोबोटिक भर्जन बनाइएको छ । उदाहरणका लागि मस्कोमा एक रोबोट ब्रोदल छ, जसमा सेक्सबोटसँग ३० मिनेट समय बिताउन ९० डलर तिर्नुपर्छ ।
मिस्टर कोल भन्छन्, आगामी दिनहरुमा डिजिसेक्सुअल शब्दको प्रसंग कम हुन्छ, किनकी भविष्यमा अनलाइ र अफलाइन जीवनमा कुनै फरक हुनेछैन । हुन सक्छ कक्षामा सेक्स एजुकेशन च्याटबक्समा पढाइहोस्, वा यस्निभर्सिटीमा भीआर क्रिएटेड संसारमा रोमान्स होस वा होलोग्राम नै आफ्नो पार्टनर खोज्न लागुन । यो सबै केही दिनमै सामान्य हुनेछ ।
सेर्गी स्यान्टोज नामको स्पेसि रोबोटिसिस्टले भनेका थिए, २५०० डलरको रोबोटको सहयोगले उनको बिहे थप बलियो भएको छ । उनी भन्छन्, एक पुरुष यहि चाहन्छकी उ आफ्नी श्रीमतीसँग उसको सहमति भएमात्र सम्बन्ध बनाउन चाहन्छ ।
खासमा डिजिसेक्सुअल मानिसहरुको संख्या किन बढिरहेको छ ? एक्सपर्टहरु भन्छन्, डिजिटल सेक्सुअलिटी मानिसहरुको पहिचान लुकाएर राख्छ । र उनीहरुमाथि कुनै प्रकारको राय बनाउन सकिँदैन । जबकी फिजिकल वल्र्डमा यस्तो हुँदैन । वास्ताविक जीवनमा आफ्नो इच्छाबारे खुलेर बोल्दा मासिहरु जज गर्न लाग्छन् । -एजेन्सी